DAAWO SAWIRO:- Wasiirka waxbarashada XFS oo madax ka tirsan UNICEF kala hadlay horumarinta waxbarashada – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDAAWO SAWIRO:- Wasiirka waxbarashada XFS oo madax ka tirsan UNICEF kala hadlay horumarinta waxbarashada
DAAWO SAWIRO:- Wasiirka waxbarashada XFS oo madax ka tirsan UNICEF kala hadlay horumarinta waxbarashada
08/11/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa maanta xafiiskiisa magaalada Muqdisho ku qaabilay madax ka tirsan UNICEF.
Labada dhinac ayaa ka wada hadlay mashruuca (Education Cannot Wait) oo loogu talo galay in lagu horumariyo tayada waxbarashadda dalka.
Wasiirka waxbarashada Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa sheegay in warbixin uu ka siiyay xubnahan ka socday UNICEF xaaladda guud ee waxbarashada dalka iyo nidaamka xulashada macalimiinta dhigeysa manhajka cusub.
“Waxaan ka wada hadalnay mashruuca (Education Cannot Wait) oo loogu talo galay in lagu horumariyo tayada waxbarashadda dalka,waxaan warbixin ka siiyay xaaladda guud ee waxbarashada dalka gaar ahaan nidaamka xulashada macalimiinta dhigeysa manhajka cusub ee dhawaan ay qeybisay wasaaradda waxbarashada dalka”ayuu yiri wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre.
Wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay dadaal ugu jirta sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dalka.
Madaxweyne Waare oo ka tacsiyeeyay geerida Xildhibaan Cabdiweli Maxamed Ibraahim.